China Home Humidifier, Aroma Humidifier, Mpanamboatra Humidifier Aromaterapy
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Home Humidifier,Aroma Humidifier,Aromatherapy Humidifier,Mpamorona manokana,,
Home > Products > Home Humidifier
Ny vokatra avy amin'ny Home Humidifier , mpanofana manokana avy any Shina, Home Humidifier , Aroma Humidifier mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Aromatherapy Humidifier R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Manontolo trano Ultrasonic evaporative Humidifier
Ny vokatra mpankafy malaza momba ny rano Humidifier Water Spray Mist
Ny fiovana lehibe indrindra Vola miovaova Humidifier ho an'ny efitrano zazakely
Resin Material Humidifier ho an'ny efitra fatoriana
Fiarovana an'habakabaka Aroma Air Humidifier ho an'ny masera
700ML Tranon-tsolika feno Humidifier Fahasarotana lehibe
Ny efitrano feno rano azo tsidihina feno fahaiza-manintona
Fanamorana Fandrafetana ambany indrindra ho an'ny tranonao
Famokarana marbra an-trano marbra amin'ny fahavaratra ho an'ny zazakely
Home elektronika Air Humidifier ary mpanadio rivotra
Fanadiovana famokarana mikraoba tsara indrindra any an-trano
Round Humourifier Humorifier Home Canada Japan India
Safidin'ny lasibatra rehetra momba ny fiainam-pianakaviana
Home Humidifier Cool Mist Best In Winter
220ML Home Humidifier Mini Portable Products
Lily Vase Quiet Trano Famerenana Ultrasonic Humidifier
Humidifier Whale Home Whid Home Terbaik indrindra
Humidifier Vokatra Mpiasa tsara indrindra 2017 manontolo
Fonosana: Boaty anatiny: 155 * 155 * 290mm ary carton Master: 63.5 * 48 * 31cm / 12pcs
Manontolo trano Ultrasonic evaporative Humidifier Description: Ity humidifier rivotra rivotra ity dia mitambatra ny kitay hazo, fifandonan'ny maoderina sy retro, ny famolavolana tokana an'ny fianakaviana dia mitondra loko mainty mangina, tsy manelingelina an'io fiatoana io ary manome tokantrano milamina sy...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 135mm sy baoritra Master: 535 * 355 * 290mm / 12pcs
Ny vokatra mpankafy malaza momba ny rano Humidifier Water Spray Mist 6 Jiro LED hisafidianana: ny loko 7 miova & Jiro mafana. Multifunction: diffuser ny hanitra manitra dia ny Aromaterapy diffuser, ny rivotra Humidifier, ny Air Purifier, ny rivotra Airizer ary ny hazavana amin'ny alina. Ultrasonic Humidifier:...
Ny fiovana lehibe indrindra Vola miovaova Humidifier ho an'ny efitrano zazakely 【DESIGN LEHIBE TSY MISY AZONY, MANDROSOANA ARY MAMPIKA ANAO? Aroma menaka mpiorina tena ilaina dia modely ho an'ny endrika tsara tarehy, modely tsara tarehy sy malala-tanana, izay manasongadina ny tontolo iainana voajanahary ,...
Resin Material Humidifier ho an'ny efitra fatoriana Noho ny famolavolana maoderina tsy manan-tsaina, ny Air Humdifier dia manatanteraka asa efatra amin'ny fitaovana iray: mpandoto, manadio, fahazavana amin'ny alina ary aromaterapy. Mampiasa ny fitanana elektronika io mba hamoronana fantsom-pifandraisana ao...
Fonosana: Boaty anatiny: 110 * 110 * 190mm; Carton master: 455 * 345 * 400mm / 24PCS
Fiarovana an'habakabaka Aroma Air Humidifier ho an'ny masera Essence Oil diffuser dia hatanjaka ny heriny ary ajanony hiasa aorian'ny fampiasana ny rano. Manova jiro LED: Asio ny sainanao ny zanakao amin'ny jiro 7 fanovana maivana, izay azo atao mifanaraka amin'ny maoderina Mamirapiratra sy Dim,...
700ML Tranon-tsolika feno Humidifier Fahasarotana lehibe Toetoetra: Soavan'ny rano 700ml izay afaka manohy mampiasa hatramin'ny 20 ora isak'izay rehetra Fahazavana LED miovaova, tantaram-pitiavana sy mety Aromaterapy: Ankafizo ny traikefan'ny aromaterapy farany amin'ity fitaovana malefaka ity...
Ny efitrano feno rano azo tsidihina feno fahaiza-manintona Ity dikan-tsolika ilaina amin'ny menaka mangingina ity dia tsara tarehy ary koa miasa. Manana famolavolana tokana tsy manam-paharoa izay miova amin'ireo safidy 7 an'ny hazavana LED izy ireo. Functions: Io diffuser io dia mampiasa ny teknolojia...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 165mm sy carton Master: 525 * 355 * 350mm / 12pcs
Fanamorana Fandrafetana ambany indrindra ho an'ny tranonao 1) Ny fanamandoana trano sy kanto azo tanterahina, indrindra indrindra ho an'izay manana fitiavana lalina ny fiainana ary manana fahatsapana mahafinaritra. 2) Ultrasonic humidifier faran'izay tsara sy miendrika serasera mba hahazoana antoka fa...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 145mm ary carton Master: 525 * 355 * 310mm / 12pcs
Home Humidifier Ebay Walmart Amazon Izy io dia mpanaparitaka menaka lehibe na azo ampiasaina ho toy ny humidifier rivotra araka izay tianao. Ny humidifier ao an-trano dia manana endrika tsy manam-paharoa sy famolavolana mpampiasa. Tsara ny famaranana ary mandeha amin'ny karazana haingon-trano. Ultrasonic...
Vidin'ny singa: USD 12.93 - 14.46 / Piece/Pieces
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 255mm; Carton master: 49.5 * 33.5 * 37cm / 12pcs
Famokarana marbra an-trano marbra amin'ny fahavaratra ho an'ny zazakely Miaraka amin'ny lokony miovaova sy ny onjan'ny zavona, ny fofona malefaka 3-in-1 mahafinaritra ity, ny halatra mangatsiatsiaka ary ny hazavana amin'ny alina dia hanampy anao amin'ny fialan-tsasatra amin'ny alina tsara....
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 160mm ary carton Master: 525 * 355 * 340mm / 12pcs
Wood Grain Home Depot Humidifier Filter Canada Ity diffuser manitra ity dia manaiky ny teknolojia ultrasonic fa ny diffuser ultrasonic dia manome aretin-doha malefaka sy hanitra manitra mba hamoronana tontolo tony sy milamina, manalefaka ary hamandoana ny hoditra maina sy voageja ary manampy anao hamofosotra mora...
Home elektronika Air Humidifier ary mpanadio rivotra Ity endrika famoronana ultrasonic humidifier ity dia novelomina, ny kolontsaina fofona avy any Atsinanana mifangaro amin'ny siansa sy ny teknolojia maoderina, ny foto-kevitry ny fampiasana ultrasonika fantsom-pamokarana vovoka fantsom-boankazo manan-danja sy...
Fanadiovana famokarana mikraoba tsara indrindra any an-trano Namboarina niaraka tamin'ny farany tao amin'ny teknolojia ultrasonika, ity humidifier ultrasonic ity dia nameno tamim-pahalemana ny efitrano amin'ny alàlan'ny fofona mahamay, tsara tarehy faran'izay tsara, izay misy freshens any anatiny,...
Fonosana: Boaty anatiny: 155 * 155 * 170mm ary baoritra Master: 480 * 325 * 360mm / 12pcs
Round Humourifier Humorifier Home Canada Japan India PERFECT SPA-QUALITY AROMATHERAPY DIFFUSER: Namboarina ho fampiasa matetika sy fampisehoana lehibe kokoa, dia mameno habe azo tsapain-tanana miaraka amin'ny fahaiza-manao lehibe ahafahana mameno efitrano malalaka misy menaka manitra sy mahasitrana. FAHASALAMANA...
Safidin'ny lasibatra rehetra momba ny fiainam-pianakaviana Dituo 400ml Aromatherapy Essential Oil diffuser dia manenika ny manodidina anao amin'ny fofona mangatsiaka mba hanamaivanana ny adin-tsaina, esory ny fofona tsy mahafinaritra ary manandratra ny hatezerana. Afangaro ny diffuser an'habakabaka,...
Home Humidifier Cool Mist Best In Winter Fa maninona no hifidy antsika? Ny Aromatherapy diffuser dia mamoaka fofona manitra mampitony, mampifaly kokoa ny tranonao miaraka amin'ny teknolojia avo lenta mifono vazivazy. Ny fiasan'ny humidifier ultrasonic dia manampy ny hamandoana amin'ny rivotra hanampy anao...
220ML Home Humidifier Mini Portable Products Ultrasonic diffuser miaraka amina kojakoja vita amin'ny maizina tsy manam-paharoa sy ny vazy endrika misy tariby, ny Aroma diffuser dia manatanteraka asa efatra amin'ny fitaovana iray: humidifier, purifier, jiro amin'ny alina ary aromaterapy. Ny diffuser hazo no...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 250mm; Carton master: 525 * 355 * 520mm / 12pcs
Lily Vase Quiet Trano Famerenana Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Humidifier: manaova veloma amin'izay mpando rivotra izay mankaleo. Ny Aroma Humidifier dia manampy hamandoana ny rivotrao, miampy hanitra somary manitra mba hahatonga ny tranonao hahatsapa sy mahazo aina. Humidifier mangatsiaka mangatsiaka:...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 175mm; Carton master: 525 * 355 * 370mm / 12pcs
Humidifier Whale Home Whid Home Terbaik indrindra Diovy ny fiainanao: mihena ny haino aman-jery tsy milamina Ultrasonic mihazona ny toerana iainanao sy hamandoana tsara. Araho ny mikraoba maina sy mikraoba / mangatsiaka mba tsy hikapohana anao, ny zanakao sy ny olon-tianao. Mampitony ny fahatsiarovan-tena: maloto avy...
Fonosana: Boaty anatiny: 155 * 155 * 210mm ary carton Master: 480 * 325 * 440mm / 12pcs
Ball Shape Best Whole Home Humidifier 2018 Namboarina taminà endrika mivalona sy boribory, fanodinana varimbazaha kitay dia misy fiasana 4-in-1 izay miasa toy ny fanamandoana rivotra madio, fanadiovana rivotra, jiro LED ary aromaterapy koa. Ultrasonic diffuser no safidy tsara indrindra amin'ny fitsaboana...
Humidifier Vokatra Mpiasa tsara indrindra 2017 manontolo - Tapaka ny fiara raha mihodina ny rano. - Jiro 7 loko, humidifier trano no manome hazavana malefaka. - 400ml rano fitaterana rano mangatsiatsiaka halatra mangatsiaka ho an'ny zavona maharitra. - Operation ultrasonic malemy, diffuser ultrasonic dia tsy...
Shina Home Humidifier mpamatsy
DITUO Home Humidifier Features toy izao manaraka izao:
Aroma humidifier OEM / ODM / OBM serivisy dia misy.
Fitaovana kalitao sarobidy: fitaovana PP.
Fametahana haizina azo tanterahina: Malemy na Malemy.
7-loko Led maivana na hazavana mafana.
Fikarakarana rano tsy mandeha rano.
Famerana 4: fampahoriana: 1 ora, 3 ora, 6 ora ary mitohy.
Whisky milamina endrika, fanamandoana aromatherapy ho an'ny efitra fatoriana, efitrano fandraisam-bahiny, birao, spa, Yoga, hotely.
Fanamarinana (ISO9001 am.fi ROHS FCC) & Mpandrafitra (12 volana)
Fanomezana tsara: tsara safidy ny mampiasa an'io mpandoto tena mahafinaritra ho an'ny namanao sy fianakavianao io, ireo tia anao.
Averina amidy Guaranteed: Azafady mba mifandraisa aminay raha misy olana.